Ithegi: ukutsha | Martech Zone
Iindlela ezintlanu zeNkampani zeMartech zidlala umdlalo omde zinikezwe ukuLindelwa okungama-28% kwiNdawo yokuThengisa
Ubhubhane weCoronavirus uye weza nemiceli mngeni yakhe kunye nokufunda kwimeko yezentlalo, eyomntu kunye neyeshishini. Kube ngumceli mngeni ekugcineni ukukhula kwamashishini amatsha ngenxa yokungaqiniseki kwezoqoqosho kunye namathuba okuthengisa aqingqiweyo. Kwaye ngoku ukuba iForrester ilindele ukwehla kwe-28% kwintengiso echithwe kule minyaka mibini izayo, ezinye zeenkampani ezingama-8,000 + ze-martech zisenokuba (ngokungafanelekanga) zibaleka ukuzixakekisa ngokuzilungiselela. Nangona kunjalo, into endiyikholelwayo iya kugcina ukukhula kwamashishini e-martech
Ukuthengiswa kwe-Agile yi-Evolution, hayi inguquko, kwaye kutheni kufuneka uyamkele
NgoLwesine, Septemba 18, 2014 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UJascha Kaykas-Wolff
Ukusuka kwizakhiwo zokwakha isoftware. Ngama-1950 iModeli yokuPhuhliswa kweMpophoma yaziswa kuyilo kunye nophuhliso lwesoftware. Inkqubo sisixhobo seshishini lokuvelisa apho, ngokuyimfuneko, impendulo eyiyo kuye kwanyanzeleka ukuba icetywe ngaphambi kokuba kuqalwe umsebenzi. Kwaye, kwelo hlabathi, impendulo eyiyo iyavakala! Ngaba unokucinga imeko apho uthathe isigqibo sokwakha skyscraper ngokwahlukileyo kwisiqingatha sendlela yokwakha? Oko kwathethi, yimveliso ye-
Spigit: Ukulungiselela ubuGcisa
NgoMvulo, Septemba 16, 2013 NgoMvulo, Septemba 16, 2013 Douglas Karr
Le vidiyo ivela kwiSpigit, eyabhengeza ukudibana nabaxhasi bethu eMindjet, yenza amanqaku aphambili kule vidiyo angafaneleki ukujongwa: Innovation = Ideation + Execution. Izimvo ngokwazo aziyonto intsha, kufuneka zenziwe. Olona luvo ludumileyo alusoloko luluvo olulungileyo lweziphumo zeshishini. Rhoqo, siye sabukela iinkampani ziyinyathela phantsi yonke imicimbi yabathengi ukubona ukuba ishishini liyasilela. Ngamanye amaxesha izinto ezifunwa ngumthengi azifanelekanga